Global Voices teny Malagasy » Nepal : Nampanginin’ny mpandala ny Fitondrana mpanjaka ny renivohitra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Marsa 2010 21:42 GMT 1	 · Mpanoratra Bhumika Ghimire Nandika Koloina RAMASINANDRO
Sokajy: Nepal, Ady & Fifandirana, Fanoherana, Politika
Noteren'ny mpitaky ny famerenana ny fitondram-panjaka araka ny lalampanorenana, sy ny fananganana firenena Haindò ao Nepal nohidiana  tanteraka ny renivohitra ao aminy. Ny arabe ao Kathmandu, toerana izay saika tomefy olona miisa an-tapitrisa matetika, dia lasa tahaka ny tanàna haolo izany tamin’io Alatsinainy io, nikatona daholo ny toeram-piasana sy ny toeram-pianarana. Maneho an-tsary ireo toerana tena nisian'ny fanoherana ny ao amin’ny blaogy Mysansar  amin’ny fiteny Nepaly.
Fanoherana nantsoin'ny antoko mpandala ny rafi-panjaka Rashtriya Prajatantra (RPP) izay tarihin'ny minisitry ny atitany teo aloha Kamal Thapa , mbola nanontany indray hoe: “mbola hisy hoaviny ve izany fitondrana enti-mpanjaka izany eto Nepal?”
United we blog for democratic Nepal  (Miray hina, mibilaogy ho an’i Nepal demokratika), bilaogy iray izay karakaraina vondron’ny mpanao gazety mitatitra ny fizotrin’ilay fotoam-bavavaka.
Nitety ireo gazety iraisampirenena ny mpandala ny rafi-mpanjaka mba hampitodika an’izao tontolo izao hanohana azy ireo. Nanoratra tao amin'ny Sri Lanka Guardian  i Dirgha Raj Prasai – mpikambana ao amin’ny parlemanta teo aloha, nandresy lahatra fa ny Maoista sy ireo karazana antoko politika isankarazany ireo dia tsy manao afa tsy ny fanimbana an’i Nepal ka tsy misy afa tsy ny fitondran’andriana ihany no afaka manarina ny firenena.
Miady varotra ny mpitoraka bilaogy Maila Baje  fa tokony ialàn’i Nepal ny rafi-pitondrana laïka.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/03/13/5124/